ရွှေတွံတေးဆရာတော် ပုန်းရှောင်နေရသူများကို စောင့်ရှောက် | MoeMaKa Burmese News & Media
တာရာမင်းဝေ (၁၉၆၇-၂၀၁၇) ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ကဗျာရွတ်ပွဲ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ဗဟိုပြုပြီး ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်
Magwe - အောင်မြေရတနာကျောင်း နွေရာသီသင်တန်း အာဏာပိုင်တို့ တားမြစ်
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ သရဲကားသွားပြမယ့် မောင်မျိုးမင်း နဲ့ ဂျာနယ် ဖြတ်စလေးများ - journal pieces
ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၂
ထိုင်းအစိုးရက ၂၀၁၂ ခု ဒီဇဘာင်္လ ၁၄ရက်နောက်ဆုံးထားပြီး ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ အားလုံးနိုင်ငံသားစိစစ်မှုပတ်စပို့ လုပ်ကြရန် ကြေညာထားပြီး မလုပ်ခဲ့ပါက တရားဝင်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ -တရားမ၀င်လာသည်ဖြစ်စေ ဖမ်းဆီးပြီး နိုင်ငံပြန်ပို့ မည်ဟုဆိုသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမဟာချိုင်ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံနေအိမ်များတွင် အာဏာပိုင်များဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖြင်းပြုနေသဖြင့် အလုပ်ရှင်များက တာ ၀န်မယူတော့သော အလုပ်သမားတချို့ ဓနိတော. ဗွက်တောများတွင် နေ့ နေ့ ညညပုန်းအောင်း တိမ်းရှောင်နေကြရပြီး အစားအသောက်ခက်ခဲနေကြရာရွှေတွံတေးဆရာတော်က ခေါက်ဆွဲခြေက်နှင့်ငါးသေတ္တာဘူးများေ ထာက်ပံ့စောင့်ရှောက်ပေးနေခဲ့သည်။
ပုန်းအောင်းတိမ်းရှောင်နေရသူများမှာ – နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့် အထောက်အထားမရှိသူများ (ဘတ်မရှိသူများ) အရွယ်မရောက်သေးသော မြန်မာပြည်ဖွား ကလေးငယ်များ – MOU ပတ်စပို့ နှင့်လာရောက်ပြီး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်ချိန် လုပ်ခအလုပ်ခွင်အန္တရာယ် စသည့် အကြောင်းများကြောင့် အလုပ်ထွက်အလျော်ပေးခဲ့သော်လည်း အလုပ်သစ်ဝင်ခွင့်မရ ဖြစ်နေသူများ(၀ပ်ပါမစ်မရှိသူများ) ဖြစ်သည်။
ရွှေတွံတေးဆရာတော်က………. ဘတ်၁သောင်းခွဲလောက်ကုန်ကျခံပြီးလာတဲ့ – နယ်စပ်တခါးမလုံလို့ အထဲရောက်နေတဲ့ -အကြွေးတွေ တင်ပြီးပြန်ဖို့ ခက်နေတဲ့ ဘ၀တွေကိုငဲ့ညှာပြီး ထိုင်းအစိုးရက အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ် – အရွယ်မရောက်သေး တဲ့ကလေးတွေကို မိဘနဲအတူနေထိုင်ခွင့်ပြုစေချင်တယ်။
MOU ကိစ္စလည်း ၂နိုင်ငံအစိုးရနဲ့အလုပ်အရှင်အလုပ်သမားအားလုံး သေသေချာချာ စနစ်တကျ သဘောတူဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဖောက်ဖျက်ရင်လည်းဖောက်ဖျက်သူကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့– ကိုယ့်အစိုးရကလည်နိုင်ငံသားတွေဘက်က အခိုင်အမာရပ်တည်ပေးဖို့စတာတွေ
မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်………. စသဖြင့်မိန့် ကြားပါသည်။